Fantaro misimisy kokoa ny Academie du Gallo sy ireo ezaka ataony hanabeazana voho io tenim-paritra io · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2022 5:45 GMT
Anatin'ireo andiany ataonay amin'izao fotoana izao mba hanasongadinana ny asan'ireo mpikatroka mampahafantatra aty anaty habaka nomerika ireo fiteny eorôpeàna vitsy an'isa sy fitenim-paritra, tianay ny hanasongadina Academie du Gallo (@AcademieduGallo) fikambanana iray miasa ho fampiroboroboana ny fiteny Gallo, teny ekena fa an'ireo vitsy an'isa ao Bretagne, Frantsa.
Mba hahafantarana misimisy kokoa momba ny asan-dry zareo dia nisy tafa nifanaovan'ny Rising Voices tamin'i Gwenaëlle Lefeuvre, iray amin'ireo mpikambana ao amin'ilay Academie.
Rising Voices (RV): Lazao anay ny mombamomba ny fikambananareo sy ny asany mifandraika amin'ny fiteny
Gwenaëlle Lefeuvre (GL): Fikambanana tsy ofisialy ivondronan'ireo vitsy an'isa mpankafy sy mpiaro ny fiteny Gallo ny Academie du Gallo. Tianay ny hitondra ny Gallo ho hita ety anaty tambajotra ary ho ankatoavina.
Mba hampitombo ny fahitàna azy, ny voalohany tsy maintsy atao dia ny fiantohana mba ho maimaimpoana ho an'ny rehetra, na iza izy na iza, ary na aiza na aiza, ireo rehetra loharano sy fitaovana anananay ao anatiny sy momba ny Gallo.
Mba hanatsaràna ny fankatoavana azy, ampahafantarinay ireny fitaovana ireny, amin'ny alàlan'ny fanelezana ny feo ao amin'ny media sôsialy sy fiarahana miasa amin'ireo hafa mpiaro tenimparitra.
Lesona momba ilay fiteny ireny fitaovana ireny, rakibolana goavana amina fiteny telo Gallo-Frantsay-Anglisy, vovonana iray azon'ny olona angatahana fanampiana amin'ny fandikàna azy… fa koa lalao sy lahatsoratra azo vakiana mitombo hatrany amin'ny fiteny Gallo miresaka lohahevitra maro midadasika: ny tantaran'i Bretagne, siansa, teknôlôjia, tsonga avy amina lahatsoratra mahazatra sy ireo mpanoratra hafa amin'ny fitenim-paritra.
RV: Manao ahoana ny fiteninao ankehitriny, anatiny sy ivelan'ny aterineto?
GL: Henjankenjana ny toeran'ny Gallo. Apetraky ny UNESCO Atlas of the World Languages ho ao anatin'ny sokajin'ireo “tena tandinonin-doza” izy… ary tamin'ny 2015 no fanavaozana farany nataon-dry zareo. Tena vitsy kely ireo mpiteny teratany. Manjavozavo ny isa, fa latsaky ny 30.000, ary ireo aza dia ny andian-taranana efa miha-antitra. Sarotra be ho an'ny tanora ny mahita ny antony tokony hianarana fiteny iray izay heveriny ho teny efa miala aina sy tsy mifanaraka amin'ny fiainana maoderina.
Izany indrindra no iadianay ety anaty tambajotra. Ny fisiana anaty tranonkala sy media sôsialy dia ahafahanay manatratra ireo mpanaraka/mpihaino tanora kokoa sy mifangaroharo kokoa, ary mampiseho amin'izy ireo fa na inona na inona fiteny dia afaka ny ho maoderina rehefa omena azy ny vintana ho amin'izany.
Satria ny fikambanana mpiaro sasany mifantoka kokoa amin'ny fifaneraserana mivantana (izay tena tsara ihany koa), ny Academie du Gallo no loharano fototra ety anaty tambajotra ho an'ny Gallo. Hitanay izany amin'ny alàlan'ireo tarehimarika mitombo be isambolana: mihoatra ny 10.000 isambolana, izay goavana be ho ana fiteny kely iray.
RV: Inona avy ireo antony manosika anareo hahita ny fisian'ny fiteninareo any anatin'ireo habaka nomerika?
GL: Mino izahay fa ny teny rehetra dia teny maoderina, ilainy fotsiny ny omena vintana hahafahany manaporofo an'izay, izay no tena mandrisika anay. Misy teny miforona isaky ny mihetsika, ary Frantsa/ny frantsay, raha ny marina, dia manana fomba amam-panao mahafinaritra amin'ny famoronana teny mba hanarahana ny fivoarana teknôlôjika. Manolotra antontan-javatra maoderina izahay, mifanaraka amin'ny tontolo misy anay, sangy mbola manaja ny fomba fiforonan'ny teny (etymology ) sy ny tantaran'ny fiteny.
RV: Farito ny sasantsasany amin'ireo fanamby izay manakana ny fiteninareo tsy ampiasaina feno ety amin'ny aterineto.
GL: Ny tsy fahampian'ny mpiteny azy!
Nefa ‘ndeha isika hanana fijery miabo: Niaraka niasa tamin'i Julien Baley ilay be fitiavana izahay, izay tsy mitsahatra manampy fiteny ao amin'ny Swiftkey keyboard, ka farafahakeliny, efa misy iray azo raisina maimaimpoana ho ao anatin'ny findainao avolenta izao ny rakibolana Gallo.
RV: Ho anao, inona avy ireo fepetra tokony ho raisina mba handrisihana ny tanora hanomboka hianatra ny fiteninareo na hanohy hampiasa azy?
GL: Tsy resaka lesona fotsiny, fa rehareha mihitsy. Tianay averina ho an'ireo mpiteny ny fiteny Gallo sy ireo fianakaviany mbola tanora, ny fireharehana miteny ny fiteny iray mifàka lalina ao amin'ny faritra misy azy ireo, fiteny iray ampahany amin'ny tantaran-dry zareo. Tena zavadehibe mihitsy ny hoe ireo zokiolona mirehareha indray mampiasa ny fiteny Gallo sy maniry hampita azy io.
Amin'ny sehatra nasiônaly, mety ho mahafinaritra be ny hahita amin'ny farany ireo fitenim-paritra ankatoavina ho toy ny ampahany amin'ny harena ara-kolontsain'ny firenena. Eo am-pototry ny molotra fotsiny ny an'ireo mpitarika firenena raha resaka fahasamihafan'ny fiteny no resahana.